HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 KocaeliKocaeli ယနေ့ Start ကိုအချိန်ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစေ၏အဖြစ်
21 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ, ဓါတ်ရထား 0
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှ kocaeliden ယနေ့အချိန်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံရဖို့စတင်ခဲ့
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်တိုးမြှင့်ပြီးနောက် Kocaeli အသစ်အခွန်ယနေ့အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး3Izmit အတွက် POUNDS ။
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာ (UKOME) တိုးမြှင့်သည့်5နှင့် 8 ရာခိုင်နှုန်းကြားလုပ်သောစက်တင်ဘာ 10 အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်စီးခအတွက်၎င်း၏အစည်းအဝေးတွင်။ ဆုံးဖြတ်ချက် UKOME လက်မှတ်ထိုး၏ယခုအချိန်တွင်ထံမှမြို့တော်ဝန် Tahir Büyükakınအခွန်ယနေ့အဖြစ်အကောင်အထည်ဖော်ခံရဖို့စတင်ပေါ်ထွန်းစေတော်မူ၏။ နယူးအခွန်အတူတကွမြို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ် 2.753TL TL မှထ Izmit ။ ဓါတ်ရထားသည့်2ပေါင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Izmit: အပြည့်အဝ 2,753TL, $ 1.502TL, လျှော့ 2,25 TL မှစ. ကျောင်းသား မှစ. ။
Gebze - များထံမှÇayırova: 8 နှုန်းအပြည့်အဝ£ 4,75, ကျောင်းသားတစ်ဦးလျှင် 5,75, လျှော့ခဲ့သည်။
Darıcaမြို့: $ 2,753TL, လျှော့ 1.50 TL မှစ. TL, ကျောင်းသားကနေအပြည့်အဝ22,25 ။
Çayırovaမြို့: TL, ကျောင်းသားကနေ $ 2,753TL, လျှော့ 1.50 TL မှစ. အပြည့်အဝ22,25 ။
Golcuk မြို့: 2,85 နှုန်းကျောင်းသားတစ်ဦးလျှင်အပြည့်အဝ 2, 2,25 £လျှော့စျေးဖြစ်ခဲ့သည်။
Izmir - များထံမှDeğirmendere: 4,95 နှုန်းအပြည့်အဝ£ 3,10, ကျောင်းသားတစ်ဦးလျှင် 3,50, လျှော့ခဲ့သည်။
Izmit - များထံမှKandıra:7နှုန်းအပြည့်အဝ£ 4, ကျောင်းသားတစ်ဦးလျှင် 5, လျှော့ခဲ့သည်။
Izmit - များထံမှMaşukiye: 4,95 နှုန်းအပြည့်အဝ£ 3, ကျောင်းသားတစ်ဦးလျှင် 3,50, လျှော့ခဲ့သည်။
Izmit - Esme ထံမှ: အပြည့်အဝ£ 5,50, ကျောင်းသားတစ်ဦးလျှင် 3,25, 3,90 နှုန်းလျှော့စျေးဖြစ်ခဲ့သည်
Izmit - Karamursel ထံမှ:7နှုန်းအပြည့်အဝ£ 4,5, ကျောင်းသားတစ်ဦးလျှင် 5,5, လျှော့ခဲ့သည်။
Izmit - များထံမှ Hereke: 5,50 နှုန်းအပြည့်အဝ£ 3,25, ကျောင်းသားတစ်ဦးလျှင် 3,90, လျှော့ခဲ့သည်။
Izmit - Kartal Metro ထံမှ: 10,50 နှုန်းအပြည့်အဝ£ 5,50, ကျောင်းသားတစ်ဦးလျှင် 7,25, လျှော့ခဲ့သည်။
Marine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် Zam အတွက်ထိခိုက်ခဲ့သည်
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ဘာ့ဂ်ယူဆောင်ခဲ့သည်။ 3,30 3,75 အခကြေးငွေ TL မှတိုးမြှင့်ခဲ့သော 2,45 2,75 TL နှင့် TL ကျောင်းသားများကိုတစ်ဦးလျှော့မှုနှုန်းဖြစ်သော TL နှင့် TL ကနေ£ 1,75 2,00 ခရိုင်, အပြည့်အဝအခကြေးငွေ။
အသစ်လမ်းရထားအချို့အခကြေးငွေဖြစ်ခဲ့သည်။ £ 1,75 2,00 TL, £ 1,25 1,50 TL နှင့် TL 1,00 1,25 လမ်းရထားကျောင်းသားအခကြေးငွေ TL မှတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်ကုန်ကျထားတဲ့လျှော့စျေးလမ်းရထား၏လမ်းရထားအပြည့်အဝအခကြေးငွေ။
ZAMA အပါအဝင် Taximeter အခကြေးငွေ
ဒါကြောင့်မီတာကြေးအစဉ်အဆက်ကိုဖန်ဆင်း TL 12,5 3,50 4,00 TL ကနေကြီးပြင်းလာဖွင့်လှစ်။ 16 3,00 TL မှသည်စီးပွားဖြစ်တက္ကစီထံမှ 3,50 ရာခိုင်နှုန်းခန့်လုပ်အားခတိုးမြှင့်အတွက်။
Izmir အတွက်အင်အားစု xnumx'luk အချိန်သို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရာခိုင်နှုန်း Entry ' 01 / 01 / 20184သန်း Izmir, 2018 ငါသည်အဦးဆုံးသောနေ့ကအတူတက်နိုးအခြိနျ။ သူတို့ကဘတ်ဂျက်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြုစုပျိုးထောင်ဖို့မဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအတွက်သောက်သုံးရေမှလွှတ်တော်တွင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း 10 ဒါ xnumx'luk ဘာ့ဂ်ရဖို့ CHP İzmirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲ့သောက်သုံးရေနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, တူရကီမြို့ပြမြူနီစီပယ်အများအပြားမြို့ကြီးများအတွက်ယနေ့အဖြစ်သက်ရောက်သို့ဘဏ္ဍာရေးနှစ်များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ဝင်ငွေခန့်မှန်းချက်သွားလေ၏ အဆိုပါ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲ့သောက်သုံးရေနဲ့ဇန်နဝါရီလ 2018 10 ၌သူ၏ xnumx'luk ရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးမြှင့်အင်အားစုသို့ entry ကို၏ယနေ့အထိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနေစဉ်။ အဆိုပါ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ 1 20182တစ်ပြားတစ်ပြားတိုး POUNDS သစ်နှစ်အတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်အပြည့်အဝကိုပုံမှန်အတိုင်းလက်ခံရရှိ ...
Manisa ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ukome ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ဖျော်ဖြေအချိန် 23 / 10 / 2018 Manisa မြူနီစီပယ်, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစျေးနှုန်းများရာ၌အစီအမံအပေါ်တစ်ဦးကြေညာချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ စျေးနှုန်းချိန်ညှိဖို့ related batch သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ထားနှင့်မြို့တော်ဝန် Cengiz Ergünသတင်းကိုပစ်မှတ်ထားပြီးကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကြောင်းဟောပြောချက်၏ရည်ရွယ်ချက်ထက်ကျော်လွန်အလေးပေးဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာ xnumx'n ပေါ်မှအဖွဲ့အစည်းများ၏ကိုယ်စားလှယ်များနေရာကြာ UKOME အားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားအလေးပေးခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းအရာပေါ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကနေကြေငြာချက်မှာတော့အောက်ပါကြေညာချက်ပေးထားခဲ့သည်: "ကောင်းကောင်း, Manisa 20 ခရိုင်အတွင်းရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုအထူးပြုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသမဝါယမလူသိများသည်အတိုင်း, နှုန်းထားများအတွက်လက်ရှိအခြေအနေများထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ယူပြီးစည်းမျဉ်းတောင်းဆိုသွားပြီခဲ့သည်။ ဥပဒေအမှတ် 17 5216 ခေါင်းစဉ်မြို့တော်အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများရှိဆဲ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ။ နှင့်ပုဒ်မအရသိရသည်ထူထောင် ...
ဇန်နဝါရီလ 2018 3.796.453 Akçarayခရီးသည်တင်ယာဉ်၏အဖြစ် 05 / 02 / 2018 တူရကီကမ္ဘာ့ဖလားအဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများရှိဆဲ (TDBB) နှင့် Kocaeli မြို့တော်ဝန် Ibrahim Karaosmanoğluပြည်ထောင်စု, သြဂုတ် 1 2017 ကတည်းကAkçarayခရီးအတွက်သူနိုင်ငံသားများနှင့်အတူ Izmit အမှုဆောင်စတင်ခဲ့သည်။ Kocaeliler ကြီးမြတ်သောမျက်နှာအစေခံရန်အများပြည်သူရဲ့ start နှင့်အတူခရီးသည်များနှင့်အတူမော်တော်ယာဉ်အဖြစ်Akçaray, စုစုပေါင်းဇန်နဝါရီလ 2018 12 3.796.453 ပြသခဲ့သည်။ ခရီးသည်Akçaray, Inc ၏ပစ်မှတ်ထားအရေအတွက်ကအထက်တစ်စွမ်းဆောင်ရည် running Ulaşımpark site ကိုအတွက်ဝန်ဆောင်မှု Kocaeliler နေဆဲဖြစ်သည်။ အောင်မြင်မှုကြောင့်Ulaşımparkဒုတိယနှစ်တွင်လမ်းငယ်ရွယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၏ 55 227 စုစုပေါင်းဘတ်စ်ကားယာဉ်အောင်မြင်လျှင်ပင်, အရည်အသွေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများလုပ်ဆောင်ရန် "ငါULAŞIMPARKကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းကျေးဇူးတင်သဘောတူ" ...
ဒါဟာဧပြီ 1 KAYBİSစနစ်န်ဆောင်မှုများ၏အဖြစ်ဖွင့်လှစ် 02 / 04 / 2018 အဆိုပါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုအတွင်း Kayseri မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး "စမတ်ဆိုင်ကယ်မျှဝေခြင်းစနစ်" ကြောင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖြစ်သကဲ့သို့ယခုနှစ်တွင် 1 ဧပြီလဝန်ဆောင်မှုသို့ဖွင့်လှစ်KAYBİS။ အဆိုပါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုအတွင်း Kayseri မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး "စမတ်ဆိုင်ကယ်မျှဝေခြင်းစနစ်" ကြောင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖြစ်သကဲ့သို့ယခုနှစ်တွင် 1 ဧပြီလဝန်ဆောင်မှုသို့ဖွင့်လှစ်KAYBİS။ ကစျေးပေါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်အရပ်က, မြို့များ၏အတွင်းစိတ်မြို့နှင့်KAYBİS 51 အချက်များအတွက်ဘူတာမှဝင်ရောက်ခွင့်ဆောင်ရွက်မှုတွေ။ အဆိုပါKAYBİSစက်ဘီး Kayseri, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏မရှိမဖြစ်နည်းလမ်းများအသုံးပြုခြင်း၏ဆွဲဆောင်မှုအားသာချက်များနှင့်အတူအသုံးပြုသူများနှင့်လူမျိုး၏ Kayseri တိုးပွားလာ၏မြို့အတွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏လူကြိုက်များနည်းလမ်းဖြစ်လာ ...
တစ်နှစ်တာအဆုံးစတင်စမ်းသပ် Drive ကို၏အဖြစ် Sivas, တူရကီ YHT 2019 24 / 07 / 2019 Sivas အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Ayhan Salih, အမောင်းနှင်မှုစမ်းသပ်မှုမှာစတင်ဖို့စီစဉ်ထားယခုနှစ် 2019 ရဲ့အဆုံးမှာကြောင်းတူရကီနှင့် Sivas မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကိုကဆိုသည်။ Ayhan "ဟုယခုနှစ်စတင် 2020 နှင့်အတူအချိန်၌အကြှနျုပျတို့၏ပြည်နယ်ရဲ့မြန်နှုန်းမြင့်ရထားကအလွန်လျင်မြန်သောလူမှုစီးပွားအပြောင်းအလဲလေ့လာတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ OSB, ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာအဘို့ပြင်ဆင်ဖို့လို၏ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်။ ကျနော်တို့စိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်ပါတယ်။ Sivaslılaraသည်ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ပိုကောင်းရယူပါ။ TBMM အမျိုးသားကာကွယ်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ Sivas လက်ထောက် Ismet Yilmaz နှင့်အခြားလက်ထောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗျူရိုကရက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, စီမံကိန်းနောက်ဆုံးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan မှလှူဒါန်းခဲ့သည်, ငါတို့၏မန်နေဂျာငါနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ်ထမ်းများနှင့်အလုပ်သမားများကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအစ်ကို, ညီအစ်မကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ "သူကဆိုသည်။ မြင့်မားသော ...
Izmir အတွက်အင်အားစု xnumx'luk အချိန်သို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရာခိုင်နှုန်း Entry '
Manisa ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ukome ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ဖျော်ဖြေအချိန်
ဇန်နဝါရီလ 2018 3.796.453 Akçarayခရီးသည်တင်ယာဉ်၏အဖြစ်
ဒါဟာဧပြီ 1 KAYBİSစနစ်န်ဆောင်မှုများ၏အဖြစ်ဖွင့်လှစ်
တစ်နှစ်တာအဆုံးစတင်စမ်းသပ် Drive ကို၏အဖြစ် Sivas, တူရကီ YHT 2019
ယနေ့နောက်ဆက်တွဲမြှောင်အတွက် Kocaeli ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများအဘို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်
Bursa သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတိတ်တဆိတ်တုံ့ပြန်မှု hikes မှဦးဆောင်ထားပါတယ်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အငြိမ်းစားတိုးမြှင် Samsun အတွက်နှစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (294) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (633) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)